से -क्स महिला–पुरुष दुबैका लागि निकै आवश्यक हुन्छ । से /क्ससँग स-म्बन्धित थुप्रै अनुसन्धानहरु प्रकाशित पनि भइसकेका छन् ।अनुसन्धानले नै महिलाले भन्दा पुरुषहरुले से’- क्सको बारेमा बढि सोच्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तैमा महिलाहरुको से- -क्स व्य’व-हार स/म्बन्धि अर्को एउटा सर्वेक्षण गरिएको छ जसका अनुसार ६ जनामध्ये एक महिला आफूलाई मन परेको केक खानका लागि शा-रि -रक स’/म्ब-न्ध बनाउन चाँहदैनन् अर्थात उनिहरू से*-क्स भन्दापनि केक मन पराउछन् ।
डेली स्टारको रि’पोर्ट अनुसार आफूलाई मन परेको केकका लागि महिलाहरु र -/क्सी पि उन र १३ प्रतिशत महिलाहरु मोबाइलको प्रयोग गर्न बन्द गर्ने गर्दछन् । यो अनुसन्धान २२०० महिलाहरु बिच ‘नेशनल केक विक’ को दौरान गरिएको हो । ६ जनामध्ये एक महिला आफूलाई मन परेको केक खानका लागि शा/ रिर-क स’म्ब-न्ध बनाउन चाँहदैनन् ।
यो – ६० बर्षे भुवनको यी युवतीसँगको अचम्मको प्रेम
अभिनेता भुवन केसी र जिया केसी लिभिङ टुगेदरमा छन् भन्ने हल्ला अब नौलो रहेन । केही वर्षदेखि यो चर्चित लभ-बर्ड भुवनको पुरानो बानेश्वरस्थित घरमा बस्दै आएको बताइन्छ । भुवन र जियाले आफूहरूबीचको स म्बन्ध लुकाउन हदैसम्मको प्रयास गरें, तर त्यो सधैं सम्भव हुने कुरा थिएन ।
यद्यपि लिभिङ टुगेदर र प्रेमसम्बन्धका बारेमा न भुवन केही बोल्छन्, न जिया नै मुख खोल्छिन् । गु पचुप रूपमा डे-टिङमा रमाइरहेको यो जोडीको स म्बन्ध नेपाली फिल्मी बजारमा छताछुल्ल फैलिएको छ । साथी मात्र हौं भन्दै पन्छिने जिया र भुवनले देश–विदेशको भ्रमण सँगै गरे पनि किन आफ्नो सम्बन्धलाई साथीको नाम मात्र दिइरहेका छन्, त्यो उनीहरूलाई मात्र थाहा छ ।
चलचित्र ‘कृ’ को एउटा गीतको छायांकनका लागि स्कटल्यान्ड जाँदा भुवनले जियालाई पनि सगैं लगेका थिए । एयरपोर्टमा जियालाई केही समय लुका उन खोजे पनि मिडियाले देखेपछि भुवनले बा ध्य भएर जियालाई आफूतिर ल्याएर सँगै तस्बिर खिचाए । यसअघि चलचित्र ड्रिम्सको छायांकनका बेला जिया पोखरा पुगेकी थिइन् ।
भुवन जियालाई लिएर चलचित्र क्याप्टेनको लोकेसन खोज्न सिक्किम पुगे । पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट भुवन र जियाको सम्बन्ध कति नजिक छ, अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । मित्रता गाँसिएसँगै भुवन र जिया नेपालका धेरै ठाउँ पुगेका छन् । यद्यपि जहाँ पुगे पनि यो जोडीले सँगै तस्बिर खिचाएर फेसबुकमा राखे पनि प्रेम सम्बन्धमा परेको कुरा भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
जियाले भुवन र अनमोलसँगका आफ्ना तस्बिर सेयर गरिरहेकी छिन् भने भुवन पनि बेलामौकामा जियासँगका तस्बिर सेयर गरिरहेका हुन्छन् । जियाले भुवन र अनमोलसम्बन्धी समाचारहरू निरन्तर सेयर गरेर परिवारकै सदस्य हुँ भन्ने झझल्को दिइरहेकी छिन् सामाजिक सञ्जालमा पनि । जिया र भुवन कैयौं पटक सँगै चलचित्र हेर्न पुगेका छन् ।
जियाको बढ्दो भूमिका- जिया भुवनको परिवारलाई आफ्नो हातमा लिन खोजिरहेकी छिन् । उनले भुवनपुत्र अनमोल केसीका लागि अभिनेत्री छनौट गर्नेदेखि मिडियासँग सम्ब/न्ध बनाउने कुरामा समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, चलचित्र ‘ड्रिम्स’ की अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई जियाले नै रोजेकी थिइन् । चलचित्र ‘क्याप्टेन’ का लागि दुई जना नव–अभिनेत्री उपासनासिंह ठकुरी तथा प्रियंका एमभी यी दुवै अभिनेत्री पनि जियाले नै खोजेकी हुन् ।
उनले इन्स्टाग्राममा तस्बिर देखेपछि आफैंले उपासना र प्रियंकासँग कुराकानी गरेकी थिइन् । उपासनाले केही समयअघि कुरा गर्दै भनेकी थिइन्, ‘मलाई चलचित्र खेल्छु भन्ने लागेको थिएन, तर जिया दिदीले मेरो तस्बिर इन्स्टामा देखेपछि बोलाउनुभयो ।
उहाँले चलचित्रमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुभयो र म तयार भएँ ।’ अर्की अभिनेत्री प्रियंकाको खोजी पनि जियाले नै गरेकी हुन् । जियासँग कुरा भएपछि प्रियंका यो टिमसँग जोडिएकी थिइन् । यो मामिलामा जियाको रोजाइलाई नै भुवन र अनमोलले सदर गरेका हुन् ।
स्वीकार गर्न किन गाह्रो ? भुवन र जियाको मित्रता गाँसिएको लामै समय भैसकेको छ । फेसबुकमा जिया र भुवनका टन्नै तस्बिर सेयर भैसकेका छन् । उनीहरू देशविदेश सँगै घुमेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सँगै पुगेका छन् । मिडियाले उनीहरूका बारेमा प्रशस्त समाचार तथा गसिप सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अनलाइन, युट्युब तथा पत्रपत्रिकामा उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर अनेकन् खबर छापिएका छन्, तर उनीहरू आफैंले भने ती समाचारमा कुनै ध्यान दिएका छैनन् ।
अनौठो प्रेमकथा- उमेरले ६० वर्ष नाघेका भुवन केसी अझै पनि उत्तिकै आ/कर्षक देखिन्छन् । कहिल्यै जिम र व्यायाम नगर्ने भुवन उत्तिकै ह्यान्डसम पनि छन् ।
उनले निर्माण गरेका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । यद्यपि भुवन पारिवारिक हिसाबले भने असफल मानिन्छन् । अनमोल, विवेक र काजलका बुबा भुवनले जियालाई पारिवारिक रूपमा एकदमै नजिक बनाइसकेका छन् । दुई पटक श्रीमतीलाई रिझाउन नसकेका भुवनले अहिले जियालाई भने विवाह नै नगरी श्रीमतीजस्तै बनाएर मात्र किन राखेका होलान् ? भन्ने प्रश्नको र हस्य अहिलेसम्म रहस्यमै छ ।
भुवनको दाम्पत्य जीवनलाई फर्किएर हेर्दा मागि विवाह टिकेन, भागी विवाह पनि टिकेन । दुवै विवाह टुट्नुमा भुवनकै हात छ भन्ने आरोप पनि नलागेको होइन । भुवनकी पहिलो श्रीमती थिइन् विजया मल्ल । उनीसँग भुवनले मागी विवाह गरेका हुन । छोरी काजल र विवेकको जन्मपछि भुवन र विजयाबीचको सम्बन्धमा फाटो आएको हो ।
विजया सम्बन्ध-विच्छेद गरी छोरा र छोरी लिएर अमेरिका गइन् । मागी विवाह नटिकेपछि भुवनले भागी बिहे गरे सुस्मिता बमजनसँग । विवाहपछि सुस्मिताले चलचित्रमा काम गरिन् र पहिलो चलचित्रबाटै हिट भइन् ।
सुस्मिताले ‘करोडपति’ बाट डेब्यु गरेकी हुन् । भुवनसँगको विवाहपछि सुस्मिताले छोरा अनमोललाई जन्म दिइन् । सुस्मिताको व्यवसायिक जीवन राम्रो गतिमा अघि बढिरहेकै बेला भुवनसँग भने ठाक ठुक पर्न थाल्यो । बिस्तारै उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो ।
अन्ततस् उनीहरू कानुनी रूपमै अलग भए । सुस्मिताको पछिल्लो चलचित्र पिंजडा ब्याक अगेन केही समयअघि मात्र प्रदर्शनमा आएको थियो । यो जोडीका एक मात्र सन्तान अनमोल केसी अहिलेका चर्चित अभिनेता हुन् । भुवनले दुईवटा विवाह नटिकेकै कारण तेस्रो विवाहप्रति अनिच्छा देखाएका हुन सक्छन् । त्यसैले उनी जियालाई एकदमै मिल्ने साथीमा सीमित राख्न चाहन्छन् ।
भुवन बिन्दास स्वभावका अभिनेता हुन । अनमोल चम्किएसँगै भुवन निकै खुसी छन् । केसी भन्छन्, ‘अनमोल नेपालको पहिलो त्यस्तो सेलिब्रेटी हो, जसको जत्तिको स्टारडम अहिलेसम्म कसैले कमाउन सकेन ।’ अनमोलको कामप्रति आफू निकै खुसी र सन्तुष्ट भएको उनी बताउँछन् ।
भुवनले अनमोललाई आफ्नो इसारामा चलाइरहेको आक्षेप पनि नलगाइने होइन, तर भुवन भन्छन्, ‘अनमोल मेरो छोरा मात्र हो, बाहिरी दुनियाँका लागि ऊ कलाकार हो, उसलाई अभिभावकका हिसाबले सम्झाउने र सुझाव दिनेबाहेक म अरू कुनै हस्तक्षेप गर्दिनँ । उसको जीवनमा उसकै डिसिजन चल्छ ।’ भुवनका अहिले दुई सारथि छन्ः अनमोल र जिया । यी दुई पात्रले भुवनलाई परिवारमा कसैको अभाव महसुस हुन दिएका छैनन् ।
खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेको यो जोडी औपचारिक रूपमा विवाह गरेर कहिले श्रीमान्–श्रीमतीको हैसियतमा पुग्ने हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्छ ।
भुवनले पनि उक्त टिप्पणीमा जियाले फ्यानका हिसाबले भनिन् होला भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । जियाले २०७२ सालको दसैंमा भुवन केसीको घरमै पुगेर सँगै टीका लगाउनुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको थियो भने कतिपयले उनीहरूको विवाह भैसकेको आशंकासमेत गरेका थिए ।
जियाले केही वर्षअघि नै भुवनलाई मन पराउँछु भनिसकेकी थिइन् । जिया र भुवननिकटका अर्का चलचित्रकर्मी भन्छन्, ‘बाहिर कस्तो हल्ला छ थाहा भएन, तर उहाँहरूको सम्बन्ध घनिष्ठ छ । यो सम्बन्ध लामो समयदेखि चलिरहेको छ । अब त्यो लिभिङ टुगेदर हो कि मित्रता मात्र ? त्योचाहिँ उहाँहरूलाई नै थाहा होला ।’
दीपक श्रेष्ठले निर्माण गरेको चलचित्र ‘हो यही माया हो’ बाट रंगीन संसारमा प्रवेश गरेकी हुन्— जिया केसी । झापाबाट अभिनेत्री बन्न काठमाडौं आएकी जियाले उक्त चलचित्रपछि एटिएम, ब र्बाद, वाचा, रिङरोड, रङ वे आदि चलचित्रमा अभिनय गरिन् । पछिल्लो समय भने उनी चलचित्र अभिनयबाट लगभग अलगजस्तै छिन् ।
जिया यो विषयमा केही बोल्न चाहन्नन्, तर जियाले यसअघि बोलेका धेरै कुरा युट्युबमा फेला पार्न सकिन्छ । उनका पुराना अन्तर्वार्ताहरूबाट पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । एक समाचारमा जनाइएअनुसार जिया भन्छिन्, ‘उहाँ मलाई अत्यन्तै मन पर्नुहुन्छ । उहाँ स्टार हो । उहाँको स्टाइल, गेटअपदेखि सबै कुरा राम्रो छ । मलाई उहाँ छोटो समयमै निकै मन पर्नुभएको हो । उहाँ मेरा बारेमा के सोच्नुहुन्छ थाहा छैन, तर म भने उहाँलाई एकदमै मन पराउँछु ।
यसअघि मिडियामा धेरै कुरा भनिसकेकाले म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्नँ । म के सम्म भन्छु भने हामीले विवाह गर्ने–नगर्ने विषयमा केही सोचेका छैनौं । सोच्दै नसोचेको विषयमा केही भन्न मिलेन । भविष्यको कुरा त्यति नै बेला थाहा होला । जिया निकै असल साथी हुन्, मेरी राम्रो साथी हुन्, शुभचिन्तक हुन् ।